10600nm CO2 LASER Factory - Shiinaha 10600nm CO2 LASER Soo-saareyaasha, shirkado cusub
La qaadan karo 10600nm quruxda caafimaadka ama caafimaadka xoolaha co2 qalliinka laser Z15A
Daaweynta leysarka CO2 adoo adeegsanaya laser-ka co2 xiran, dherer dhererkiisuna yahay 10600nm, soosaarka laydhka infrared infrared la arki karin waxaa lagu gartaa cufnaan, tamar sare. Soosaarka leerka ee muraayadda diirada saaraya, barta udub-dhexaadka u ah unugyada la bartilmaameedsanayo waxay soo saari kartaa gaas heerkul sarreeya, waxaa loo isticmaali karaa goynta, gubashada.
Nidaamka ka saarista maqaarka maqaarka ee 'Co2 laser' Z25A
unugyada midabka leh iyada oo aan wax saameyn ah ku yeelan mid ka mid ah unugyada ku xeeran, taas oo yaraynaysa waqtiga bogsashada isla markaana kor u qaadeysa habka maqaarka ee dabiiciga ah si loo abuuro unugyo cusub oo caafimaad qaba.
Feejignaanta Ka-Saarista Joogtada ah ee Daaweynta Maqaarka Laser Z15C
daaweynta garaaca wadnaha waa badbaado, nidaam aan duullaan ahayn oo kuu oggolaanaya inaad dib uhesho maqaarka cusub, caafimaad qaba quruxdaada.
Laambarka jajabka ah ee loo yaqaan 'laser fractional laser' ee loogu talagalay ka saarista Nabarrada Z15B
garaaca wadnaha ayaa ah jajab marka loo eego inuu si xoogan u daaweynayo unugyada midab duugoobay ee epidermal iyada oo aan saameyn ku yeelan mid ka mid ah unugyada ku xeeran,
40W RF Fractional CO2 Laser Generator Siilka Oo Adkeynaya Nabar Saarista ER700C
30W Jajabka Caafimaadka Laser shaabadaysan Off CO2 Laser ER700B
daaweyn jajab ah oo soo saarta kumanaan tiirar qotodheer, oo yaryar oo maqaarkaaga ah, oo loo yaqaan aagagga daaweynta micro. garaaca wadnaha ayaa ah jajab marka loo eego inuu si xoogan u daaweynayo unugyada midab duugoobay ee epidermal iyada oo aan saameyn ku yeelan mid ka mid ah unugyada ku xeeran,
40w Co2 Jajab Laser Ganacsi Siilka Adkaynta ER800A
Mashiinka wuxuu leeyahay 3 nidaam: Fractional CO2, VRL iyo CO2, wuu qancin karaa baahiyaha oo dhan, maalgashi aad u fiican oo Amni ah.
10600nm Fractional CO2 Laser waa mid ka mid ah leysarka ugu badan ee loo adeegsado maqaarka is qurxinta, Waxay Waxtar u Leedahay Nabarrada Nabarrada, Midabaynta, Biraha, Khadadka Fiican iyo yareynta Laab Laabashada.